Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Muhammad al-Jawlani
Muhammad al-Jawlani, oo sidoo kale loo yaqaano Abu Muhammad al-Golani, oo sidoo kale loo yaqaano Muhammad al-Julani, waa hoggaanka sare ee ururka argagaxisada, ururka al-Nusrah Front (ANF), al-Qaacidada Suuriya.
Bisha Abriil 2013, al-Jawlani wuxuu ballan ku maray inuu naftiisa u hurayo al-Qaacida iyo hoggaamiyaheeda Ayman al-Zawahiri. Bishii Luulyo 2016, al-Jawlani wuxuu ammaanay al-Qaacida iyo al-Jawlani isagoo ka soo muuqday fiidiyow online-ka la soo dhigey oo wuxuu sheegey in magaca ANF la bedellayo oo loo bedelli dalayo Jabhat Fath Al Sham (“Conquest of the Levant Front”).
Inta hoggaanka al-Jawlani la hoos imaanayay, ururka ANF waxay Suuriya dhexdeeda ka fulisay dhowr weerar argagax ah, inta badan iyaga oo shacabka bartilmaameedsanaya. Bisha Abriil 2015 dhexdeeda, ururka ANF waxaa la soo sheegey in ay afduubteen, oo wakhti ka dibna soo daayeen, ku dhowaad 300 qof oo shacab Kurdish iyagoo ka afduubtay bar kontarool oo Suuriya ku taala. Bisha Juun 2015 dhexdeeda, ururka ANF iyaga ayaa sheegtay mas’uuliyadda xusuuq lagu sameeyay 20 qof oo ahaa dad degan tuulada Druze ee Qalb Lawzeh oo ku taalay gobolka Idlib, Suuriya.
Bisha Janaayo 2017 dhexdeeda, ururka ANF waxay ku darsameen kooxo mucaarad oo mayilka adag si ay u noqdaan Hayat Tahrir al-Sham (HTS). ANF waxay weli ka mid tahay urur ku xiran al-Qaacidada Suuriya ka jirta. Inkastoo al-Jawlani uusan ahayn hoggaamiyaha HTS, weli wuxuu sii yahay hoggaamiyaha ANF, kaa soo ah qofka ugu muhiimsan ee HTS.
ANF waxaa loo idmaday inuu yahay Urur Argaggixiso Shisheeye (FTO) sida hoos timaada Xeerka Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadda iyo Gaar ahaan u Magacaaban Urur Argagaxiso sida hoos timaada E.O. 13224. Guddiga Ammaanka ee Ururka Qaramada Middoobay ee [UN Security Council] ISIL (Daacish) iyo Guddiga Cuna-qabataynta al-Qaacida ayaa sidoo kale lagu daray liiska cuna-qabataynta.
Al-Jawlani waxay Waaxda Arrimaha Dibadda u magacowdey sida Gaar ahaan u Magacaaban Urur Argagaxiso Caalami [Specially Designated Global Terrorist (SDGT)] sida hoos timaada Amarka Dowliga ee 13224. Sidoo kale wuxuu ku qoran yahay Guddiga Amniga ee Qaramada Middoobay ee ISIL (Daacish) iyo Guddiga Cuno-qabataynta al-Qaacida.
Tariikhda Dhalashada: Inta u dhaxeyso 1975 ilaa 1979
Halka uu ku Dhalashay: Suuriya
Jinsi (lab ama Dheddig): Lab
Muuqaalka: Bunni madow xigeen
Naanays: Muhammed al-Jawlani, Abu Mohamed al-Jawlani, Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Abu Ashraf, Ahmed Hussein al-Shar’a, Ahmad Hussain al-Sharaa, al-Sheikh al-Fateh